Naannoo Bulchiinsa mootummaa Oromiyaa, zoonii Jimmaa, aanaa limmu koosaa keessatii jimaata dheengaddaa Ebila 23 /2021 galgalaa haleellaa hidhattoon geggeesaniin lubbuu namaatiif qabeenya irratii midhaan qaqabuu isaa jiraatonii VOAttii himaniiruu.
Gabaasaan VOA sagaantaa afaan Amaaraa Habtaamuu suyyum Namoota maqaan isaan akka beekamu hinbarbaanne haasofsiise akka jedhanittii, ganda tokko keessatii nammii 26 du’uu isaani, namoonii 4 immoo madaa’uu isaanii akka argaan dubbataniiru.
Jiraataa ganda biro kan ta’an nammii tokko namoonnii 53 du’uu isaaniitiif beeladoonnii 200 ol ajjeefamuu isaanii dubbataniiru. Ganda Daallee Busaasee jedhamuu keessatis balaan kun qaqabuu kan dubbatan jiraataa tookoo ganda tookko keessa namoonnii 2000 ol qeyee isaanirraa buqa’uu isaanii ibsaniiru.
Balaa kana kan geessisee garee hidhatootaa mootummaan Itoophiyaa ONAG SHANEE jedhee waamuu akka ta’e kan dubbatan jiraattonii aanaa limmu koosaa, tarkaanfiin hidhattoonii fudhatan kun eenyummaa irratti kan hundaa’eedha jedhu.
Karaa biraatiin dhimma kana ilaalchisee gabaasaan VOA kan haasofsiise Komishiinii mirga namoomaa Itiyoophiyaatii gorsaa ol aanaa kan ta’an Obbo Imaad Abdulfattaah , jaarmiyaan isaanii balaan kun bakkeewan caqasaman keessatii qaqqabuu isaa akka odeefannoo qabaniif kanas karaa midiaa haasaatiin ifa gochuu isaanii dubbataniiru.
Balaa kanaan kan ka’e midhaan qaqqabuu kan dubbatan obbo Imaad lakkoofsaa namoottan midhamanii garuu sirriitii baruu akka hindandeenye himaniiru.
Haleellaa kana akka geessisee jiraatotaan kan himatamee waaraana bilisummaa oromoo jedhee of waamu ykn mootummaan Itoophiyaa ONAG Shanee jedhee kan waamu gareen hidhatootaa dhimma kana keessaa harka qabaachuu isaa mirkanefachuuf yaaliin gabaasonnii VOA godhan hin milkoofinee. Ajajaa garee kanaa kan zoonii lixaa akka ta’an kan beekaman Maroo ykn kumsaa Dirbaa Kanaan dura VOA dhaan gaafatamanii gareen isaanii namoottan nagaa ykn siviilota irratti akka midhaa geesisuu hinbarbaanne dubbachuun isaanii waan yaadatamuudhaa.
Bulchiinsa zoonii jimmaatiif mootummaa naannoo oromiyaattii namoottan dhimmi kun ilaallatu irraa yaada isaanii argachuudhaaf yaaliin VOAn taasise yeroodhaaf akka hin milkoofne gabaasaan VOA Habtaamuu Suyyum himeera.
Zoonii Walloo Kibbaatti Hojjattoonni Filannoo Ojii Galmeessuu Dhaabun Himame
Bulchiinsi Prezidaant Baayiden Dhimma Mirga Namaa Irratti Ka Fuuleffatu Ta’uu
Gareeleen Mormitoota Somaaliyaa Murtii Prezidaantii Biyyattii Simatan
Ministarri Dhimma Alaa Yunaayitid Isteetis Marsaa Interneetiin Afrikaa Daawwatan
Gamtaan Awrooppaa Biriteen Waliin Walii Galte Daldalaa Raggaasise